खुसी, सपना सबै कोमाभित्र — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » पत्रपत्रीका, मुख्य समाचार, समचार, स्वास्थ्य → खुसी, सपना सबै कोमाभित्र
खुसी, सपना सबै कोमाभित्र
October 31, 2015४०७ पटक
पारिपट्टि १० हजार फिट अग्लो गजधम्म उभिएको घुम्टे पहाडमा जसरी बादलका झुप्पा लुकामारी खेलिरहन्छन्, त्यसैगरी कृष्णकुमारी विकको मनभित्र पीडाहरू उकुसमुकुस मडारिरहन्छन् । प्रसिद्ध घुम्टेको शिखरमा सूक्ष्म देखिने सिद्ध भैरवको मन्दिरलाई उनी सोधिरहन्छिन्, ‘मेरो खुसी कहिले फर्किएला ?’ जवाफ कतैबाट नआएपछि उनको आँखा रसाउँछ । कसैले नदेख्ने गरी तप्प आँसु खसाल्छिन् । पछ्यौरीले पुछ्दै काम गर्न थाल्छिन् ।
गाउँघरमा हरियाली छाएको छ । घरअघि सयपत्री र मखमली फक्रँदैछन् । भर्खरै दसैं विदा भयो । तिहार आउँदैछ । चाडवाड, रमाइलो बाहिरी वातावरणसँग उनी रमाउन सकेकी छैनन् । उनको मन भने खडेरीजस्तै सुक्खा छ । कुनै पनि चाड नआइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, कृष्णकुमारीलाई ।
२०६८ मंसिर १६ शुक्रबार ।
बेलुका ८ बजे कृष्णमायाको मोबाइलमा रिङ बज्छ ।
‘घरमा सबै सन्चै छौ ?’
‘हामी सबै ठिक छौं । तपाईंलाई कस्तो छ ?’ उनको जवाफ ।
‘म ठिक छु । पूर्वतिरको साथी छुट्टीमा घर आउँदै छन् । म तिमीहरूलाई केही सामान पठाउन एयरपोर्ट जाँदै छु ।’ श्रीमान्–श्रीमतीको सुखदुःखका संवाद पाँच मिनेटसम्म चल्छ । बागलुङको हरिचौर भुजुङ्गेबाट पैसा कमाउन कतार गएका गिरीप्रसाद विकले घरमा कोसेली पठाउने जानकारी दिँदा श्रीमती कृष्णकुमारी मनमनै निकै हर्षित हुन्छिन् ।
श्रीमान्ले विदेशबाट पठाइदिने सामानको प्रतीक्षामा उनी खुसीले फुरुंग भइहालिन् । बाँकी मनका कुरा अर्को दिन सुनाउने वाचाका साथ उनी फोन राख्छिन्। सात समुद्रपारि रहेका श्रीमान्लाई जोड्ने माध्यम त्यही मोबाइल थियो । मनमा असंख्य कुरा थिए । एक छिन फोनमा कुरा गर्दैमा मनका सबै कुरा कहाँ सकिन्छ र ! पोख्न मन लागेका कुरा मन भित्रभित्रै लुकाएर राखिन् ।
२०६४ सालमा श्रीमान् कतार पुगेपछि घरमा छोरी जन्मिएकी थिइन् । श्रीमान्को अभावमा छोरीको आगमनले कृष्णकुमारीको घर उज्यालो भएको थियो । छोरीको अनुहार बाबुको जस्तै भएको फोनमा बताइरहन्थिन् । सम्भव भए दुई–तीन दिनको फरकमा कुराकानी हुन्थ्यो । कमाउन गएका श्रीमान् र छोराछोरीको भविष्य सम्झँदै भित्रभित्रै रमाउँथिन्, कृष्ण ।
त्यसपछि दुई दिनसम्म पनि उनको मोबाइलमा घन्टी बजेन । तीन दिन बित्यो अझै श्रीमान्को फोन आएन । कति प्रयास गर्दा पनि सम्पर्क नभएपछि उनी अत्तालिइन् । तीन दिनपछि सामान्य बिरामी भएको खबर आयो । कतारमै रहेका आफन्त चन्द्रबहादुर विकसँग सम्पर्क भएपछि एकै साधमा सोधिन्, ‘के भयो ?’
एयरपोर्टमा घर पठाउने सामान पु¥याएर डेरा फर्कंदै गर्दा दुर्घटनामा परेको सामान्य खबर त पाइन्, ‘पापीको मन परचित्त’ भनेझैं उनको मनले पत्याउनै दिएन । कतारमा रहेका चिनजानका सबैलाई फोन गर्न थालिन् । बल्लबल्ल सही समाचार प्राप्त भयो, ‘टाउकोमा चोट लागेकाले श्रीमान् गिरीप्रसाद आइसियुमा छन् ।’
तीन दिनअघि सामान पठाइदिने कुरा गरेका श्रीमान् अस्पतालमा रहेको कुरा सुन्दा कृष्णकुमारीलाई भाउन्न भयो । आँखैअगाडिको घुम्टे पहाड फनफनी घुम्न थाल्यो । चारैतिरका पहाड अँध्यारो देख्न थालिन्, उनले । मनमा सँगालेर राखेका आशाहरू छताछुल्ल भए । छोराछोरीको भविष्य अन्धकार दखिन् । होस हरायो उनमा, अन्ततः पिँडीमै गर्लम्म ढलिन् ।
त्यसयता न उनले आफ्नो मनका कुरा श्रीमान्लाई सुनाउन पाएकी छिन्, न त श्रीमान्को बोली नै । श्रीमान् कतारको अस्पतालमा ‘कोमा’मा छन्, उनी यता गाउँमा दुखजिलो गरेर छोराछोरी हुर्काउँदै छिन् । तर, श्रीमानकै सम्झनाले पिछा गर्न छाडेको छैन ।
साथीमार्फत घरमा केही सामान पठाएर एयरपोर्टबाट डेरा फर्कंदै गरेका गिरीप्रसाद बाटो काट्ने क्रममा दुर्घटनामा परे । उनलाई तत्काल अस्पताल पु¥याइयो। आइसियुमा राखी उपचार भयो। तीन महिनापछि आँखा त खोले । तर, उनी बोल्न–चल्न नसक्ने भए । उता उनको शरीरमात्रै कोमाभित्र छ, यता परिवारको भने सिंगो खुसी नै कोमाभित्र पुगेझैं भएको छ।
भदौ अन्तिम साता हरिचौर– १, भुजुङ्गे पुग्दा कृष्णकुमारी आँगनमा टोलाएर बसिरहेकी थिइन् । छोरी भने हजुरबुबाले बाटेको डोरी समाएर स्किपिङ खेल्दै थिइन् । गिरीप्रसादकी दिदी बोल्न सक्दिनन् । उनी गोठमा भैंसीलाई घाँस दिँदै थिइन् भने बुबा दलबहादुर चुरोटको धुँवा उडाउँदै पारि क्षितिजतिर नियालिरहेका थिए । सायद उनी असीम आशाको दृष्टि फ्याँकिरहेका थिए होला— छोरो अवश्य फर्किएर आउनेछ ।
कमाउन गएको छोरा दुर्घटनामा परेको सुनेपछि वृद्ध बुबा बेलाबेला झस्किरहन्छन् । ‘सानैमा आमा खसिन् । आमाबुबा दुवै बनेर हुर्काएको हुँ,’ उनका आँखा टिलपिलाए, ‘छोरो विरानो देशको अस्पतालमा छ । उसलाई कति पीडा भइरहेको होला । कस्तो दुःखी बा भएँ म ।’
चार वर्षअघि श्रीमान् दुर्घटनामा परेको खबर सुन्दा कृष्णकुमारीलाई बाँचूला भन्ने लागेकै थिएन । तै काखे छोरी र छोरालाई हेरेरै चित्त बुझाइन् । अहिले पनि उनी हाँस्ने कोसिस त गर्छिन्, तर भित्रैदेखि केले अँठ्याएर ल्याउँछ; सक्दिनन् । कसैले सोधिदिन्छ, ‘तिम्रो श्रीमान्लाई नेपाल कहिले ल्याउँछन् ? अहिले कस्तो छ ?’ उनीसँग यस्ता प्रश्नको उत्तर दिने साहस जुट्दैन ।
कृष्णकुमारीको १८ वर्षमै प्रेमविवाह भएको थियो । आठ वर्षदेखि श्रीमान्को अनुहार देख्न नपाएकी उनीसँग सुनाउनका लागि थुप्रै कुरा बाँकी छन् । ससाना छोराछोरीको अनुहारमा अलिकति खुसी देखेरै आफैं सम्हालिने कोसिस गर्छिन् ।
कतारमा रहेका गाउँकै प्रेम खत्रीलाई दुई वर्षअघि श्रीमान्ले सास फेरेको भए पनि सुनाइदिन अनुरोध गरिन् । खत्रीले मोबाइल गिरीप्रसादको कानैमा लगेर टाँसिदिए । ‘घरमा सबै जना तपाईंलाई नै कुरेर बसेका छौं,’ यत्ति भनिनसक्दै कृष्णकुमारीको भक्कानो छुट्यो । छोरीले मोबाइल च्यापेर भनिन्, ‘बाबा, छिट्टै घर आउनुस् है !’
कोमामा रहेका गिरीप्रसादले छिटोछिटो सास फेरेको आवाज आयो । किनकि उनी बोल्न सक्दैनन् । छोरो आठ कक्षामा पढ्दै छन् । कहिलेकाहीँ बुबाको फोटो छातीमा टाँसेर रोइरहन्छन् । ‘मेरो बाबा कतारमा दुर्घटनामा पर्नुभयो । अहिले कोमामा हुनुहुन्छ । हामीसँग बोल्न सक्नुहुन्न । उठ्न सक्नुहुन्न,’ कृष्णकुमारीले सुनाइन्, ‘कामीमा यस्तै मनोवाद लेखेर छोराले राखेको छ । म त त्यो पढ्न पनि सक्दिनँ ।’ उनमा एउटामात्रै आशा छ, ‘सरकारले उहाँलाई नेपाल ल्याउने व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो ।’
कोमामा रहेका श्रीमान्को स्वास्थ्यलाभका लागि उनले यतैबाट आफूले सक्दो गरिन् । धामीले ‘ठूलो सातो’ गएको सुनाए । त्यही निहुँमा पूजापाठ लगाइन् । ज्योतिषीकहाँ धाइन् । ग्रहदशा कटाइन् । देवीदेवताका नाममा भाकल गरिन् । यस्तैमा लाखभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको उनी बताउँछिन् । ‘धिक्कार रहेछ । भगवान्ले पनि मेरो वेदना देखेनन् । धर्मकर्म पनि धेरै गरेँ । तर, केही सिप लागेन,’ उनको आस्था खलबलिएको छ, ‘आजभोलि त भगवान नै छैनन् जस्तो लाग्न थालेको छ ।’
दुर्घटना हुनुअघि श्रीमान्सँग जति कुरा गरिन्, त्यत्ति नै हो अन्तिमपटक बोलेको । यतै भइदिए हेरेरै चित्त बुझाउने उनको आशा छ । ‘सरकारले यतै ल्याइदियोस्, म स्याहार्छु,’ आँसु पुछ्दै उनी भन्छिन्, ‘छोराछोरीले पनि बुबाको मुख देख्न पाउँथे ।’
कतारमा रहेका नरबहादुर बिक र प्रेम खत्रीसँग कृष्णकुमारीको फोन भइरहन्छ । बिरामीको स्वास्थ्यमा केही सुधार भएको छैन । बीमा रकम आएको छैन । साहुको ऋण कसरी तिर्ने, छोराछोरी कसरी पढाउने, घर खर्च कसरी धान्ने— कृष्णकुमारीको चिन्ता बढ्दो छ ।
दोस्रोपटक कतार पुग्दा उनले भनेका थिए, ‘तिमीलाई सुख दिन सकिनँ । नेपाल फर्केर आउँछु, त्यसपछि दुःख–सुख जे गरे पनि सँगै बसौंला । म विदेश नफर्कने गरी घर आउँछु ।’ श्रीमान्ले सुनाएका ती शब्दहरू उनी दोहो¥याइरहन्छिन् ।
दैलोमाथि सपरिवारको फोटो राखिएको छ । सँगै खिचिएको फोटो होइन, प्रविधिले जोडेर छोराछोरी सहित बाबुआमा पनि त्यहीँ छन् । आठ वर्षअघि कतार गएपछि जन्मिएकी छोरीले नै आठ वर्षकी भइसकिन् । स्कुल जान थालिसकेकी उनले बुबालाई फोटोमा मात्रै देखेकी हुन् । बोली सुन्न पाएकी छैनन् ।
बागलुङ सदरमुकामबाट चार घन्टाको गाडी यात्रा, दुई घन्टा उकालो पैदलपछि हरिचौर– १, भुजुङ्गे पुगिन्छ । भुजुङ्गे गाउँमै बस्छिन्, कृष्णकुमारी । मनभित्रको आशाको धिपधिपे दियो बालिरहेकी छिन्, उनी ।
गिरीप्रसादमात्र होइन बागलुङ नारायणस्थान–९, कैयाका ४० वर्षे विष्णुबहादुर सुवेदी पनि कतारमा कोमामै छन् । गतहप्ता विष्णुको घर कैया पुग्दा ८१ वर्षे बुबा लालबहादुर कोक्रोमा पनाति हल्लाउँदै थिए । उनको कानले उत्ति भर दिँदै । अलि चर्को स्वरमा छोराको कुरा गर्नासाथ उनी कोक्रो हल्लाउनै छाडेर भक्कानिए ।
कतारबाट आउने गाउँले छोराहरूसँग उनी खबर सोधिरहन्छन् । ‘कुनै सुधार नभएको’ जवाफ पाउँदा पाउँदा उनी थाकिसके। ‘छोरा यहीँ भइदिएको भए भोलि भेट्न आउँथ्यो,’ कुसेऔंसीको अघिल्लो दिन संवाददातासँग कुरा गर्दा आँखाभरि आँसु पार्दै उनले भनेका थिए, ‘सात वर्ष भयो । कतार जानुअघि बिदाबारी भएर गएको मान्छे अहिले त्यो अवस्थामा छ ।’
दुर्घटनामा परी घाइते भएका विष्णुबहादुरको फोटो गाउँलेले मोबाइलबाट फोटो खिचेर ल्याइदिएका थिए । ‘फोटो देखेको थिएँ । खुवाइदिए खान्छ रे । आफैं उठ्न नसक्ने अवस्थामा छ भन्छन्,’ उनले खुइय गरे, ‘अब तक्दैन भन्छन् ।’
बुहारी पार्वती रोजगारका लागि कतारमै पुगेकी छिन् । नेपाल ल्याउने भन्ने सुनेको एक वर्ष भइसक्यो । उनी भन्छन्, ‘अर्काले भनेको सुन्ने हो । खोइ कहिले, कसले ल्याइदिन्छन् मेरो छोरा । अहिलेसम्म थाहा पाएको छैन ।’
दुर्घटनामा परेपछि छोराको नाममा ग्रहदशा कटाए । सवालाख बत्ती बाले । ३५ जना पण्डित राखेर पूजापाठ पनि गरे । तर, छोरालाई अझै ठिक भएको छैन । लालबहादुर भन्छन्, ‘छोराको परान मात्र देख्न पाए हुन्थ्यो । छोरो दुब्लाएको छ भन्छन् । आजभोलि फोटोसम्म देख्न पाएको छैन । फोटो पठाइदिए पनि हेर्थें ।’ उनलाई छोराको फोटो हेर्ने रहर बाँकी नै छ ।
विष्णुबहादुर दुर्घटनामा पर्दा कतारमै रहेका कैयाकै यामबहादुर पौडेल अहिले घर फर्केका छन् । उनले भने, ‘कतारमा हुन्जेल भेट्न गइरहन्थेँ । एक पाटो शरीर चल्दैन । मुढो हेरेजस्तै हो ।’ काठमाडौंमा म्यानपावर कम्पनी खोलेर बसेका विष्णुबहादुर कामको सिलसिलामा कतार पुगेकै बेला दुर्घटनामा परेका हुन् । उनका दुई छोरा स्कुल पढ्दै छन् । ‘बाबु नै परदेशमा कोमामा रहेपछि यी छोराहरूको भविष्य के होला ?’ उनका भाइ नारायणको गुनासो छ ।
गिरीप्रसाद र विष्णुबहादुरजस्तै सुर्खेतका हरिबहादुर बस्नेत पनि यति बेला कोमामा कहालीलाग्दो जीवन बिताइरहेका छन् । दिनभरि काम गरेर डेरामा आएपछि बेहोस भएपछि उनी कोमा पुगेका हुन् । घरमा उनका तीन छोराछोरी छन् । छोराछोरीलाई मजदुरी गरेर पढाउन र हुर्काउन निकै गाह्रो भएको श्रीमती दीपा बताउँछिन् ।
‘दुःख गरेर पनि छोराछोरी पढाउन गाह्रो छ । कमाउने मान्छे नभएपछि ऋण दिन पनि मान्दैनन्,’ उनी सुनाउँछिन् । आफू बिरामी हुँदा औषधि उपचार पनि समयमा गर्न नसकेको फोनमा उनले बताइन् । कतारको उपचारपछि सन्चो भएर आउने आशा भने जीवितै छ । उनले भनिन्, ‘घरमा खान पु¥याउनै गाह्रो छ । कम्पनीले उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।’ बिरामीले पाउने क्षतिपूर्ति कतार सरकारले दिनुपर्ने माग परिवारको छ । आफ्ना बिरामीलाई उचित सेवा सुविधासहित देशमै ल्याएर उपचार गर्न सरकारलाई उनीहरू आग्रह गर्छन् ।
रोजगारीको सिलसिलामा कतार पुगेका ११ जना युवा अहिले कोमामा जीवनको कठिन समय गुजारिरहेका छन् । बागलुङका दुई जना र अन्य जिल्लाका नौ जना कोमामा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । सडक दुर्घटनामा परेपछि उनीहरू कोमा पुगेका हुन् । उनीहरू सबैको कतारको हमद अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
नेपाल सरकारलाई आफ्ना नागरिक तुरुन्त फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न कतार सरकारले बारम्बार ताकेता गरिरहेको छ । नेपालमा रहेको कतार दूतावासले समेत पत्र पठाउने गरेको छ । नेपालमा बिरामीका लागि स्तरीय अस्पतालको अभाव भएकाले तुरुन्त ल्याउन नसकिएको परराष्ट्र मन्त्रालय मध्य एसिया–पश्चिम, एसिया तथा अफ्रिका महाशाखा अन्तर्गतको समितिका सदस्य–सचिव दुर्पदा सापकोटाले बताइन् ।
सरकारले एक महिनाअघि कोमामा रहेका नेपालीहरूको अध्ययनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रमेश खनालको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । यदि नेपाल ल्याउन सकेमा कतार सरकारले बिरामी ल्याउने र सुरुको तीन महिना अस्पतालको उपचार खर्चसमेत बेहोर्ने अनौपचारिक जानकारी आएको सापकोटाले जानकारी दिइन् । अन्य देशमा भने कोमामा रहेको बारे कुनै जानकारी नआएको उनले बताइन् ।
नेपाल ल्याउने चुनौती
आफ्ना नागरिक देश फर्काउने दायित्व राज्यको हो । उनीहरूलाई नेपाल फर्काउन प्राविधिक समस्या देखिन्छ । कोमामा रहेका बिरामी अर्धचेत अवस्थामा रहन्छन् । उनीहरू चल्न, बोल्न सक्दैनन् । यता ल्याए पनि उनीहरूलाई उपचारका लागि अस्पतालमै राख्नुपर्ने भएकाले घरमै लगेर राख्ने अवस्था हुन्न । सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा राखेर सघन उपचार हुन आवश्यक छ । तर, कोमामा रहेका नेपालीलाई नेपाल ल्याउने ठूलो चुनौती रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय मध्य एसिया–पश्चिम, एसिया तथा अफ्रिका महाशाखा अन्तर्गतको समितिकी सदस्य–सचिव दुर्पदा सापकोटा बताउँछिन् । ‘कोमामा रहेका बिरामीको दीर्घकालीन हेरचाह गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको खर्च कसरी जुटाउने भन्ने समस्या छ,’ उनी भन्छिन्, ‘सुविधासम्पन्न आइसियु बेडको अभाव यहाँ देखिएको छ ।’
अर्को चुनौती हो, कोमामा रहेका व्यक्तिका परिवारले नेपाल फर्काउन आधिकारिक रूपमा पहल नगर्नु । नेपाल फर्काउने विषयमा परिवारको धारणा बुझ्न पहल भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ । चार जना अकस्मात् बिरामी भई कोमामा पुगेकाले तिनले कानुनतः क्षतिपूर्ति नपाउने बताइएको छ । सकेसम्म ११ जनाको क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्ने सापकोटाले बताइन् । कतिपयको मुद्दा फैसला भइसकेको परिवारको मन्जुरी र बिरामी ल्याएपछि क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउनेबारे कतारस्थित नेपाली राजदूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छ ।
बिरामीका लागि भेन्टिलेटर सहितको आइसियु बेड चाहिने भएकाले त्यसको लागि छलफल भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव रामकृष्ण अधिकारी बताउँछन् । ‘अधिकांश सरकारी अस्पतालका बेडमा बिरामीको चाप हुन्छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो देशका नागरिक यतै ल्याउनुपर्छ । तयारीका लागि आन्तरिक छलफलमा छौं ।’नागरीक दैनिक